Budhcad-badeed haysatay markab u raran ganacsato Somaliland ah oo soo daayay ka dib markii la siiyay lacag madaxfurasho ah | Berberanews.com
Home WARARKA Budhcad-badeed haysatay markab u raran ganacsato Somaliland ah oo soo daayay ka...
Budhcad-badeed haysatay markab u raran ganacsato Somaliland ah oo soo daayay ka dib markii la siiyay lacag madaxfurasho ah
Bosaso-(Berberanews)-Markab u raran ganacsatada Somaliland oo muddo laba billood ku dhawaada ku jiray gacanta Budhcad-badeed Somali ah oo ku haystay xeebaha Puntland, ayaa shalay la sii daayay ka dib markii lacag madax-furasho ah laga bixiyay.
Sida warar aanu ka helat sii daynta markabku sheegeen waxa laga bixiyay lacag dhan 250’000 oo madaxfurasho ah, ka dib markii ay fashilmeen dedaalo ay wadeen madaxdhaqammeed reer Somaliland ah oo u tegay Puntland furdaaminta markabka ganacsi oo magaciisu yahay MV LAYLA.
kooxaha Budhcad-badeedka Soomaalida ahi waxay 19 Feb 2012 ka afduubeen biyaha Badda waddanka Cuman Markabka Mv Layla oo sida bagaash iyo gaadiid lacag lagu qadaray $ 4 milyan oo doolar , kaasoo ay saaranyihiin 17 qof oo isugu jira shaqaalaha Markabka iyo dad ka soo raacay dekedii uu markii hore ka soo shiraacday.
Xukuumadda Puntand oo gacansaar dhaw la leh kooxaha budhcad-badeedla ah ee Somalida, ayaan wax tallaabo ah ka qaadin kooxaha ay wada-shaqaystaan ee dhibaatada ku haya maraakiibta gacansi ee isaga kala goosha marin-biyoodka muhiimka u ah isku xidhka gancsiga Africa, Asia iyo adduunka.
Previous articleHambalyo Meher: KHAALID MAXAMED ISMAACIIL IYO HANA MUSTAFE
Next articleDhakhtar u dhashay dalka Gemany oo ka hadlay xaaladda ay ku suganyihiin kooxo budhcad-badeed Soomaali ah oo xabsiga dalkaas ku jira.Video